Vaovao - Fampidirana ireo vokatra IVEN - Tube Fangalarana Rà
Ny fantsom-panangonana rà mandriaka dia karazana fantsom-pitaratra tsindrona tsindry azo ampiasaina izay afaka mahatsapa fanangonana ra be dia be ary mila ampiasaina miaraka amin'ny fanjaitra fanangonana ra. Misy karazany 9 ny fantsom-panangonana ra banga, izay manavaka ny lokon'ny satrony. Ny milina fanoratana fantsom-bokatra fanangonana rà dia andiana fitaovana ampiasaina amin'ny varavarankely fanangonana ra ao amin'ny hopitaly miaraka amin'ny fisafidianana fantson-drà mandeha ho azy, fanontana mandeha ho azy ary fametahana ny kaody barcode miaraka amin'ny mombamomba ny marary.
Amin'izao fotoana izao, sarotra ny toe-javatra fanangonana rà any amin'ny tobim-pitsaboana. Manangona ra amin'ny fomba mifantoka ny marary, ary lava loatra ny fotoana filaharana izay mora miteraka ady tsy ilaina. Tsy azo ihodivirana fa ny mpitsabo mpanampy dia mety manao fahadisoana amin'ny fisafidianana fantsom-panangonana rà ary ny fantsom-pifandraisana tsy manara-penitra. Ny rafitra dia fitaovana mitambatra manan-talenta, mifampahafantatra ary manara-penitra.
Ao amin'ny Shanghai IVEN Pharmatech Engineering Co., Ltd, dia manao fikarohana lalina lalandava izahay. Manamora ny fizotran'ny asa ny rafitra, manafoana ny fotoana fanangonana rà ho an'ny marary, mampitombo ny isan'ny marary manangona rà isaky ny ora iray, manatsara ny fiandrasana be olona ary filaharana mararin'ny fanangonana ra. Ambonin'izany, manatsara ny fahafaham-pon'ny marary izy io ary mandavorary ny fitantanana ny ra amin'ny alàlan'ny fampahalalana an-tsary ny hopitaly. Raha jerena ireo entana fanangonana ra, misafidy am-pahendrena ny fantsona, manonta ary mametaka marika eo ho eo ao ambanin'ny vinavinany fa ekena ho azy ny marika tany am-boalohany. Ary ny fitaovana fizahana fiara dia mandà ny fantsona misy marika raha tsy misy marika. Izy io dia misoroka ny fiasan'ny marika marika manarona ny fikandrana santionany, ny fisafidianana diso, ny fantsona fantsona fanangonana rà sy ny marika diso. Afaka manatsara ny fahombiazan'ny fanangonana ra, manatsara ny fahafaham-pon'ny marary, mampihena ny fisian'ny fifandirana amin'ny dokotera sy ny marary ary mampiroborobo ny fiasa ara-pahasalamana mandritra ny dingan'ny diagnostika sy fitsaboana iray manontolo.